July 22, 2019 Thuta Star 0
မိုင်(၁၅၀၀) ခရီးနှင်ပြီး၊ အဝေးကချစ်သူကို SURPRISE လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိုင်းပေါင်း ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ Long-distance relationship ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအဖို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သစ္စာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်နေရရင်၊ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနီးလေးလို့ ခံစားရမှာပါ။ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေပါစေ၊ သစ္စာမရှိဖောက်ပြန်နေရင်၊ […]
အင်စတာဂရမ်မှာ Song JoongKi ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအကုန် ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ Song HyeKyo
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ နာမည်ကျော် တော့ပ်စတားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟယ်ကျိုတို့ဟာ ယနေ့ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်မှာ တရားဥပဒေအတိုင်း အတိအလင်း ကွာရှင်းပြတ်စဲလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အများ ချစ်ခင်အားကျရတဲ့ စုံတွဲအခုလို အတိအလင်း ကွာရှင်းလိုက်တာဟာ စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Song စုံတွဲကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေစေမယ့် လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရားဥပဒေအရ […]
သေသွားတဲ့ ချစ်သူကို ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ နေ့စဉ် ပို့စ်တင်လေရှိတဲ့ ကောင်မလေး
သေသွားတဲ့ ချစ်သူကို ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ နေ့စဉ် ပို့စ်တင်လေရှိတဲ့ ကောင်မလေး ပျောက်သောသူ ရှာလျှင်တွေ့၊ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တစ်ခါတလေ မှာတော့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ မှားယွင်း တတ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် တချို့တွေဟာ အပြင်လောကမှာ သာမက ရင်ဘတ်ထဲကနေ အပြီးတိုင် ပျောက်ဆုံးသွားတာ […]
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်က တို့ဆေးမိပြီး ပျောက်သွားတဲ့ မိန်းကလေးကို ပြန်တွေ့….
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်က တို့ဆေးမိပြီး ပျောက်သွားတဲ့ မိန်းကလေးကို အခု ပြန်တွေ့ပြီဖြစ်ပြီး ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ရွှေတွေတော့ ပါသွားတယ်လို့ ရွာလူကြီးတယောက်က ပြောပါတယ်။ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် လက်ပံပျားရွာက အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မအေးမြလင်းဟာ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်ညက ရွာကနေ ပျောက်သွားလို့ အဲဒါကို သူ့အဖေရဲ့ သူငယ်ချင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ […]
ဆံရှည်သူငယ်ချင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိန်းမဆီ ပို့ပေးခဲ့မိတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ နောင်တ
ဆံရှည်သူငယ်ချင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိန်းမဆီ ပို့ပေးခဲ့မိတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ နောင်တ မလေးရှားနိုင်ငံက အမျိုးသား တစ်ယောက်ဟာ ချစ်ဇနီးကို အချစ်စမ်းတဲ့ အနေနဲ့ ဆံရှည် သူငယ်ချင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ပို့ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဆံရှည် သူငယ်ချင်းက ဓာတ်ပုံ ထဲမှာ တစ်ခြမ်းစောင်း အနေအထားနဲ့ ထိုင်နေတာ […]
လမ်းပေါ်တွင် ခွေးစာကျွေးပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁ သိန်းနှင့် ထောင် ၃ လချမည်ဟု စည်ပင်သတိပေး…
လမ်းပေါ်တွင် ခွေးစာကျွေးပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁ သိန်းနှင့် ထောင် ၃ လချမည်ဟု စည်ပင်သတိပေး ရန်ကုန်မြို့ရှိ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ အစာကျွေးရင် အရေးယူတော့မယ် လို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သတိပေးလိုက်ပါတယ် မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်း အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ […]
အသက်(၉) နှစ်နဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုမော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒုတိယဆု ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေး Isabell….
ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေး Isabell ကတော့ အသက်(၉)နှစ်သာရှိပြီး စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်များရဲ့ ချစ်ခြင်းခံနေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် Talent ရှိသူဖြစ်ပြီး ဆရာဂျွန်လွင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးတပည့်များထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ မြန်မာရိုးရာအငြိမ့်အကကိုလည်း ၀ါသနာပါသူပီပီ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာကတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Isabell လေးရဲ့ နာမည်အရင်းကတော့ ကြယ်စင်ဝင့်နိုင် ဖြစ်ပြီး လက်တလောမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ မှာလက်ခံကျင်းပတဲ့ C […]
ရည်းစားအဖြစ်တောင်မှ မတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ ( ၁၀ ) မျိုး…
ရည်းစားအဖြစ်တောင်မှ လုံးဝမတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ ( ၁၀ ) မျိုး ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… 1) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ပါတယ် လို့ ပြောပြီး နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား 3) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တာဝန် ယူချင်စိတ် မရှိသော ယောင်္ကျား 2) […]
အိမ်ပိုင် မြေပိုင် ဖြစ်လိုသူများအတွက်.. သစ်တံခါးဆရာတော် ၏ ” မြေ” ပိုင်ရှင် ” အိမ်” ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း…
သစ်တံခါးဆရာတော် ၏ ” မြေ” ပိုင်ရှင် ” အိမ်” ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း မြန်မာဂမ္ဘီရ လောကီဝိဇ္ဇာ ဓရ ပညာဖြင့် ” မြေ” ပိုင်ရှင် ” အိမ်” ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း – သစ်တံခါးဆရာတော် ၏ ရေးသား ဖော် […]